Halkee ayuu marayaa heshiiskii uu Bruno Fernandes ugu biiri lahaa kooxda Real Madrid? – Gool FM
(Lisbon) 02 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhowdahay maalinta ugu dambeysa ee suuqa kala iibsiga ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Sporting Lisbon, Bruno Fernandes.
Kubad-abuuraha reer Portugal ayaa qarka u saarnaa inuu u wareego mid ka mid ah kooxaha ka ciyaara horyaalka Premier League sida Tottenham Hotspur iyo kooxda Manchester United, laakiin heshiiska ayaa burburay sabab la xiriirta khilaaf ka dhashay qiimaha ciyaaryahanka.
Si kastaba ha noqotee, Fernandes ayaa haatan u muuqda inuu ku riyoonaya inuu u dhaqaaqo garoonka Santiago Bernabeu, iyadoo Los Blancos loo maleynayo inay heysato waqti kooban, laakiin ay heshiis 64 milyan gini ah la gaartay 24-sano jirkaan sida laga soo xigtay Wargeyska Daily Mail.
Xiddiga khadka dhexe ee weerarka ayaa rikoor cajiib ah xilli ciyaareedkii hore, isagoo dhaliyay 32 gool, 18 kalena caawiye ka ahaa 53 kulan oo uu saftay tartammada oo dhan.
Fernandes ayaa la aaminsan yahay in ololahan cusub uu ka bixi doono kooxdiisa, xilli loo diiwaan-geliyay labo gool iyo afar caawin shantii kulan ee ugu horreeysay xilli ciyaareedka.
RASMI: Javier Hernandez oo ka tagay horyaalka Premier League, kuna biiray koox ka dhisan dalka Spain